Situation in Zimbabwe after Mugabe, investors waiting. – Femoza.org
Situation in Zimbabwe after Mugabe, investors waiting.
March 1, 2018 March 1, 2018 Category: FEMOZA News, General News
With a new government in place in Zimbabwe, foreign investors remain in a wait and see mode as international institutions call for reforms.
After the departure of Robert Mugabe as the country’s leader, the outlook for FDI in Zimbabwe has been strengthened, although investors are still awaiting the correct indications from the Bretton Woods institutions, which are asking the government of the country to make clear progress in the reforms in its agenda, in order to relaunch its economy and correct fiscal imbalances.
Emmerson Mnangagwa, the new president, has vowed that Zimbabwe is open to investment, which is postulated to build the country after years of economic decline under Mugabe’s rule. In this way, the former leader of Zimbabwe was ousted from power in November 2017, after taking control of the country’s military, which ended with the incorporation of Mnangagwa, his former deputy, at the end of 2017.
Read more: https://www.fdiintelligence.com/Locations/Middle-East-Africa/Zimbabwe/Investors-play-the-waiting-game-in-post-Mugabe-Zimbabwe